သင့်ရဲ့အလုပ်အကိုင်အဖြတ် | ဂျော့ဘ် & USAHello ထံမှအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအရင်းအမြစ်များကို | USAHello
လူတွေနေတဲ့အလုပ်အကိုင်အစွန့်ခွာရန်ဆုံးဖြတ်ကြောင်းအကွောငျးရငျးမြားစှာရှိပါတယျ. သင့်ရဲ့အလုပ်ကနေနုတ်ထွက်ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူ. သင်သည်သင်၏အလုပ်ဖြတ်နှင့်မည်သို့ကောင်းတစ်ဦးအထင်အမြင်ထားခဲ့ဖို့အခါပြောအဘယျသို့ထွက်ရှာမည်.
အလုပ်တစ်ခုဖြတ်လည်းဟုခေါ်သည် ကနေနှုတ်ထွက် သို့မဟုတ် ထွက်ခွာ အလုပ်တစ်ခု. ကောင်းသောအကျင့်တို့ကိုနှင့်အလုပ်အကိုင်အစွန့်ခွာဖို့မကောင်းတဲ့နည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်. သငျသညျဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်တဲ့အခါမှာ, ကနည်းမှန်လမ်းမှန်၌သင်တို့၏သူဌေးကိုပြောပြရန်အရေးကြီးသည်င်. သင်ကုမ္ပဏီစွန့်ခွာသည်အထိသင်သည်သင်၏အကောင်းဆုံးကြိုးစားရန်ဆက်လက်သင့်တယ်. သူတို့အနာဂတ်မှာသင်ကူညီကြလိမ့်မည်ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့လုပ်ဖော်နှင့်အတူပြုမူဖို့ဘယ်လိုစီစဉ်.
သင်တစ်ဦးအလုပ်သစ်တွေ့ပြီဘာလို့လဲဆိုတော့သင်ကထွက်ခွာနေတယ်ဆိုရင်, အ 100 သင်အလုပ်သစ်ကိုစတင်ပါနိုငျသောရာခိုင်နှုန်းကိုသေချာ! သင်သည်သင်၏ဟောင်းများကိုအလုပ်ကနေနုတ်ထွက်မီကမ်းလှမ်းမှုတစ်ခုစာတစ်စောင်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြသေချာအောင်လုပ်ပါ. တခါတလေ, ကုမ္ပဏီများကသူတို့ရဲ့ကမ်းလှမ်းချက်ကိုအကြောင်းကိုသူတို့ရဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်. သင်တို့မူကားတစ်ဦးစာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပြီးစတင်နေ့စွဲရှိသည်ဆိုပါက, ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့သူဌေးမှပြောပြရန်အချိန်ဖြစ်ပါသည်.
တခါတလေမန်နေဂျာလည်းအလုပ်များဖြစ်ကြပြီးဖြည့်ဆည်းမပေးနိုငျ. သောအမှုဖြစ်တယ်ဆိုရင်, ထို့နောက်အီးမေးလ်ဖြင့်အတူနှုတ်ထွက်, စာအားဖြင့်, ဒါမှမဟုတ်ဖုန်းကိုဖုန်းခေါ်ဆိုမှုနှင့်အတူလက်ခံနိုင်ဖွယ်ရှိပါတယ်.
သင်ကကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာသငျသညျခံစားသင့်ရဲ့သူဌေးသင်၏အချိန်ပြောပြရန်လိုပေမည်. မှန်မပါလျှင်, သင်လေ့လာသင်ယူသောအရာကိုတန်ဖိုးထားပြောနိုင်.
သငျသညျထွက်ခွာနေကြသည်ရှင်းပြပေမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအသေးစိတျကိုမပေးပါဘူး. ဥပမာ, ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်ပိုမိုပေးဆောင်အခြားအလုပ်အကိုင်အများအတွက်စွန့်ခွာနေကြ. သင်ရုံသင်သည်အခြားအနေအထားတွေ့ပြီပွောနိုငျ.
သင်သည်မည်သည့်သတင်းအချက်အလက်များကိုမျှဝေသို့မဟုတ်သင်မသက်မသာဖြစ်စေမည်သည့်မေးခွန်းများကိုဖြေဆိုရန်မလိုပါ. သင်အမြဲပြောနိုင်, “ငါအဖြေဖို့မကြိုက်တတ်တဲ့။”
မလုပ်ပါနှင့် သင့်ရဲ့မန်နေဂျာရှေ့၌သင်တို့လုပ်ဖော်ပြောပြ. သင့်ရဲ့သူဌေးကိုသိအဖြစ်သို့သော်မကြာမီအဖြစ်သင့်လုပ်ဖော်ပြောပြဘူး.
2. အနည်းဆုံးသင့်ရဲ့မန်နေဂျာ Give2ရက်သတ္တပတ်’ အသိပေးစာ
သင့်ရဲ့အလုပ်စာချုပ်သင်ပေးရန်ရှိသည်မည်မျှအသိပေးစာဟုပြောစေခြင်းငှါ. အသိပေးစာ သင်အမှန်တကယ်စွန့်ခွာမီထွက်ခွာနေကြသည်ဟုပြောရပါမည်ဘယ်လောက်ဝေးရှေ့ဆက်နည်းလမ်းများ. အဘယ်သူမျှမဖော်ပြထားသောအသိပေးစာကာလလည်းမရှိဆိုပါက, အနည်းဆုံးသင့်ရဲ့မန်နေဂျာကိုပြောပြ2ရှေ့ဆက်အချိန်ရက်သတ္တပတ်. ကြိုတင်အသိပေးစာပြပွဲထည့်သွင်းစဉ်းစားပေးခြင်းနှင့်သင်အစားထိုးခံရဖို့အတှကျအခြိနျခွင့်ပြု.
တခါတလေ, အသစ်ရဲ့အလုပ်ရှင်ရှိရာသို့အလျင်အမြန်စတင်ရန်သင်လိုအပ်မယ်. သင့်ရဲ့စာချုပ်မဟုတ်ရင်ပြောပါတယ်မဟုတ်လျှင်, သင်သည်သင်၏လက်ရှိသူဌေးမှတောင်းပန်နှင့်သင်လျင်မြန်စွာစွန့်ခွာဖို့လိုအပ်ရှင်းပြနိုင်ပါတယ်. သင်သည်သင်၏အလုပ်သစ်မစတင်ပြီးနောက်သင်တစ်ဦးအနေဖြင့်အဘို့အသငျသညျအစားထိုးလူတစ်ဦးအနေဖြင့်မေးခွန်းများကိုဖြေဆိုရန်မပူဇော်နိုင်မည်.
တစ်ဦးကနုတ်ထွက်စာကိုသင်ထွက်ခွာကြသည်ကရှင်းပြသည်. သင်သည်သင်၏အလုပ်နုတ်ထွက်သည့်အခါအများစုကအလုပ်ရှင်တဦးတည်းခံယူချင်. ဒီကွန်ပျူတာကနေပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်လက်မှတ်ရေးထိုးလျှင်ဒါဟာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်. သငျသညျပရင်တာမရှိဘူးဆိုပါက, သင်သည်လည်းပဲစာရွက်တစ်ရွက်ပေါ်မှာရေးလို့ရပါတယ်. ဒီနေရာမှာတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် နမူနာနုတ်ထွက်စာကို သငျသညျကိုသုံးနိုင်သည်.
အကောင်းတစ်ဦးအထင်အမြင်စွန့်ခွာဖို့အရေးကြီးတယ်ဒါဟာဖြစ်ပါသည်. အချိန်ပေါ်ထံသို့ Continue နှင့်အစောပိုင်းစွန့်ခွာကြဘူး. သငျသညျစွန့်ခွာသည်အထိကြိုးစားလုပ်ဆောင်နေသိမ်းဆည်းထားပါ. သင်ပြုသောအရာတို့ကိုထဲက run လိုလျှင်, သငျသညျသူတို့ကိုကူညီနိုင်မယ်ဆိုရင်သင့်ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုမေး.
သင်သည်သင်၏အလုပ်အပေါ်ကိုယူပါလိမ့်မယ်သူတစ်ဦးကိုလေ့ကျင့်ပေးဖို့လိုအပ်နိုင်ပါသည်. သင်သည်ထိုသူတို့နှင့်အတူသင်ယူအရာအားလုံးကိုဝေမျှဖို့သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးလုပ်ပါ. ဒါဟာသင့်ကုမ္ပဏီများအတွက်ပြောင်းလဲမှုပိုမိုလွယ်ကူစေပါလိမ့်မယ်.
သငျသညျကိုအနီးကပ်အတူအလုပ်လုပ်ခဲ့လူများအပေါင်းတို့အားနှုတ်ဆက်ပြောသေချာအောင်လုပ်ပါ. ကောင်းသောလုပ်ဖော်ဖြစ်ခြင်းအဘို့ထိုသူတို့ကျေးဇူးတင်ပါသည်. သငျသညျအနာဂတျမှာအလုပ်တစ်ခုရှာဖွေနေတယ်ဆိုရင်, သင်ပေးရန်သူတို့ကိုမေးနိုငျ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ရည်ညွှန်း. ကိုးကားအလားအလာအလုပ်ရှင်မှကြင်နာစွာသင်တို့တွင်အဆိုပါမညျသူကလူမျိုးဖြစ်ကြ၏. သင်တို့သည်လည်းလုပ်နိုင် သငျသညျ LinkedIn တို့အပေါ်တစ်ဦးထောက်ခံချက်ရေးသားဖို့လုပ်ဖော်ကိုမေး.
6. အဟောင်းလုပ်ဖော်ပြောပြရန် Continue
သင်သည်သင်၏ဟောင်းများကိုအလုပ်အကိုင်အကျန်ကြွင်းစေပြီပြီးနောက်, သင်ဆဲနိုင်သတင်းစကား, ခေါ်ဆိုခ, သို့မဟုတ်သင့်လုပ်ဖော်သွားရောက်ကြည့်ရှု. သငျသညျအနီးအနားရှိရောက်နေတယ်ဆိုရင်, သငျသညျဟဲလိုပြောသဖြင့်ရပ်တန့်နိုင်ပါတယ်. သငျသညျအဝေးမှာရောက်နေတယ်ဆိုရင်, သင်သည်သင်၏သူဌေးသို့မဟုတ်သင့်အကြိုက်ဆုံးလုပ်ဖော်အီးမေးလ်ပေးပို့နိုင်ပါတယ်. သူတို့ကိုသင်၏အသက်တာသို့မဟုတ်အလုပ်သစ်အကြောင်းကိုသတင်း Give. အဆက်အသွယ်တည်းခိုသင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာသင်၏အချိန်တန်ဖိုးထားပြသ.
သငျသညျကိုကောင်းစွာကုသမခံခဲ့ရပါသောကွောငျ့ဒီတစ်ခါလည်းသင်သည်သင်၏ကုမ္ပဏီ left. ထိုကိစ္စတွင်, သင်ဤလုပ်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူး.
သငျသညျသင့်သောအရာတို့ကိုလည်းရှိပါတယ် မဟုတ် သင့်ရဲ့အလုပ်အကိုင်အဖြတ်သောအခါအလုပျ!
သင်သည်သင်၏မိသားစုနှင့်အတူပိုပြီးအချိန်ဖြုန်းဖို့စိတ်လှုပ်ရှားစေခြင်းငှါ. သငျသညျတစ်နေရာရာမှာအခြားရွေ့လျားကြောင့်ဒီတစ်ခါလည်းသင်ပျော်ရွှင်နေကြသည်. နေဆဲ, သင့်ရဲ့လုပ်ဖော်မှဝါကွှားပါဘူး. သူတို့ကသူတို့ရဲ့အခြေအနေကိုပျော်ရွှင်မဖြစ်စေခြင်းငှါ, နှင့်ဤသူတို့ရဲ့ခံစားခကျြကိုထိခိုက်စေပါလိမ့်မယ်.
သင်သည်သင်၏အလုပ်ဒါမှမဟုတ်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်အတူမပျော်ရွှင်ခဲ့ကြတာဖြစ်နိုင်တယ်ဒါဟာဖြစ်ပါသည်. အဟောင်းအလုပ်သို့မဟုတ်အလုပ်သစ်မှာကလူကသူတို့ကိုအကြောင်းကိုကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်ခြင်းကိုပြုလို့ပြောမနေပါနဲ့. သငျသညျမပျော်ဖြစ်ကြပါလျှင်, သင်၏မိတ်ဆွေများသို့မဟုတ်မိသားစုအပေါ်ယုံကြည်မှု.
ရှုပ်ထွေးသင့်ရဲ့ Workspace ကိုစွန့်ခွာမနေပါနဲ့
အိမ်မှာသင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသောအရာတို့ကိုယူသေချာအောင်လုပ်ပါ. သင့်ရဲ့အလုပ်ကနေချေးခဲ့သမျှကိုပြန်သွား. သင်တစ်ဦး Workspace ခဲ့ပါလျှင်, လာမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအဘို့သန့်ရှင်းရေး.